XIKOO cooler rivotra indostrialy azo ampiasaina amin'ny trano fanatobiana entana
Ny orinasa Fordeal dia trano fitehirizana e-varotra feno sisintany feno any Foshan City, manana velaran'ny trano fitobiana an'arivony metatra toradroa. Amin'ny fahavaratra mafana any atsimon'i Sina, ity trano fanatobiana vy ity dia mafana be ao ambanin'ny masoandro mafana be. Mba hanatsarana ny kalita ...
XIKOO dia manana traikefa mihoatra ny 14 taona eo amin'ny sehatry ny rivotra sy ny fampangatsiahana ho an'ny atrikasa. miantehitra foana izahay ary manangona traikefa momba ny injeniera, noho izany XIKOO dia manana fombafomba mahomby amin'ny fananganana sy ekipa tompony miasa sy mahay miasa. Voalobia Shenzhen Quanyin ...
Fampandrenesana momba ny tontolo iainana Xikoo Industrial Protection Environmental Protection Cool Scheme
Ny tena vokany mangatsiaka dia mifandraika indrindra amin'ny famolavolana ny fametrahana ny cooler indostrialy. Amin'ny famolavolana ny rafitra fanamafisana ny zavamaniry mangatsiaka amin'ny rivotra, dia tsy maintsy azonao ny fomba fikajiana ny isan'ny fiovan'ny rivotra ao amin'ny atrikasa sy ny fomba fametrahana indostrialy evaporative air c ...
Inona avy ireo karazana masinina mangatsiaka amin'ny indostria ao amin'ny fitaovana fampangatsiahana zavamaniry, sy ny toerana fametrahana?
XIKOO cooler rivotra hangatsiaka trano fanatobiana entana lehibe
Amin'ny fahavaratra, ny trano fanatobiana vy, trano vy ary rindrina vita amin'ny vy dia tratry ny hafanana ambony. Masiaka ny rivotra anaty trano. tsy afaka miasa eto amin'ity tontolo ity ny mpiasa. Ary mora simba sy mitombo bakteria ny entana, ary mety hiteraka lozam-pifamoivoizana koa, noho izany, maika ...
XIKOO cooler industrial industrial Cool and ventilation system hametraka tetikasa ho an'ny kanto Xincun Middle School
Ny kanto Xincun Middle School dia manana velaran-tany 6 500 metatra toradroa. Raha tsy manana rivotra sy rafitra mangatsiatsiaka tsara any Guangzhou misy mari-pana be izy mandritra ny taona, dia mety ho mafana sy mafana be ilay café. Mpampianatra sy mpianatra an'arivony maro no tsy vonona hisakafo any. ...
XIKOO portable air cooler XK-15SY ho an'ny foibe fiofanana
Nikaroka cooler ho an'ny sekoly ny Kolejan'ny fitaterana an-tsekoly Guangdong, nifandray tamina mpamatsy maromaro izy ireo ary nangataka tamin'izy ireo mba haka rivotra mangatsiaka kokoa hanaovana andrana. Aorian'ny fizahana ataon'ny mpiasan'ny sekoly dia andramo ny traikefa ary ampitahao. hoy izy rehetra XIKOO air cooler XK-15SY no tsara indrindra. XIKOO XK-15S ...
XIKOO XK-75SY tanky rano be mangatsiatsiaka kokoa ho an'ny fampisehoana an-kalamanjana ao amin'ny Palace Presidential Palace.
Ny cooler XIKOO mobile environment friendly environment dia azo ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny toerana rehetra izay mila rivotra sy fampangatsiahana, toy ny ivon-toerana fialamboly marobe, toeram-piantsonana ambanin'ny tany, hetsika goavambe an-kalamanjana ary toeram-bahoaka hafa. Ny Lapam-panjakan'ny Singapore dia manao kaonseritra an-kalamanjana amin'ny 20 ...
XIKOO XK-18SYA dia ampiharina amin'ny cool farm
AndriamatoaMauro avy any Italia dia manana toeram-pambolena 700 metatra toradroa, nitady masinina izy mba hampangatsiaka ny toeram-pambolena amin'ny faritra malalaka, ary nijoro tamin'ny gorodona tamin'ny kiho mba hitondra rivotra any anaty trano. XIKOO dia nanoro hevitra ny 6PCS XK-18SYA. Taorian'ny nahazoan'i Mr.Mauro ny entana dia nozarainy taminay ny sary miasa mangatsiatsiaka kokoa, ary nilaza izy fa tena ...